Wararka - Hebei Lubang Carbon Products Co., Ltd. waxaa la guddoonsiiyay alaab-qeybiye u qalma ee Baosteel Union Steel.
HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD waxay abaalmarisay suppler tayo sare leh oo ah baogang steel steel sababo la xiriira wadashaqeyn wanaagsan iyo tayada wanaagsan ee korantada garaafka ee socodka, 2020.
Kooxda Baogang oo la aasaasay 1954, waa saldhig weyn oo wax soo saar bir ah oo ku yaal Shiinaha iyo saldhiga ugu weyn ee warshadaha adduunka. waxay leedahay laba shirkadood oo ku taxan, mongolia baotou steel union co., ltd iyo gudaha mongolia baotou steel rare-earth hi-tech co., ltd, oo wadartoodu guud tahay in ka badan 160 billion yuan ($ 24.11 billion) sanadkii 2015.
Kooxda Baogang waxay ku taalaa degmada bayan obo macdanta, halkaas oo laga helay 175 nooc oo macdan ah iyo 71 nooc oo curiye ah. waxa intaa dheer, degmadu waxay leedahay keydka dhulka ugu yar iyo kan labaad ee ugu weyn niobium adduunka oo dhan.
Kooxda Baogang waxay ku hawlan yihiin warshadaha birta, dhulka dhifka ah, macdanta, iyo qaar ka mid ah warshadaha aan birta ahayn, sida soosaarka qalabka, dhismaha injineernimada iyo ka shaqaynta cuntooyinka dabiiciga ah. waxay laamo ka sameysay 13 gobol iyo dhowr xafiis oo ku yaal goballada midoobay iyo mongolia.
Kooxda Baogang waxay ku taalaa gudaha ismaamulka mongolia, oo ku xira qaybta woqooyi iyo qaybta woqooyi-galbeed ee shiinaha, oo ku dhow mongolia iyo russia. waxay ku leedahay faa iidooyin dhulka, dhuxusha, birta, biyaha iyo kheyraadka korontada.
Xidhiidhka wanaagsan ee birta baogang, hebei rubang carbon rpoducts co., Ltd. sidoo kale si isdaba joog ah u siiya macaamiisha kale ee birta leh adeegyo soo jiidasho leh oo tayo sare leh una soo bandhigaya macaamiisha kale ee birta ah gudaha Shiinaha iyo dibedda iyo adduunka oo dhan oo lagu sii xoojinayo filimada, malaysia, taiwan, turkey, ploland, Russia, spain, uae., argentia, india, italia,; dhirta birta ah sida: rizhao steel rike group co., ltd., iskudhafka birta shiinaha, fujian sangang (group) co., ltd., panzhihua steel vanadium co., ltd., laiwu laanta & steel co., ltd of birta shandong & steel gorup co., ltd.
warqad cadeyn ah oo dhameystiran waxaa soo saaray baogang steel steel march 16, 2020 sida hoos ku xusan: